Waraana Yemen: Erga dhorkaan kaafamee booda gaargaarsi nyaata inni jalqabaa gara buufata doonii galeera - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Yeman Keessatti namoonni miliyoonotaan lakkaa'aman qarqara beelaa irratti argamu, jedha UN
Humni walta'iinsa Saawudiin geggeefamu erga karaa banee booda dooniin Mootumoota Gamtoomanii (UN) kan gargaarsa nyaata feete uggura torban sadiitiin booda gara buufata doonii finciltootaan to'atamtuutti galteeti.
Dhorkaan ture kun balaa beelaa miliyoonotaa daran hammeessee ture.
Xiyyaroonni meeshaalee walaansaa fe'an Sanbata darbe magaalaa gudditti Sana'aa akka qubatan kan hayyamame ture wayita ta'u, dooniin nyaata fe'e ammoo akka darbuuf yeroo hayyamamu kun kan jalqabaati.
Uggurri kun kan godhame Sadaasa 6 erga haleellaan misaa'eelaa Saawuud Araabiyaa irratti taasifameen booda ture.
Humni walta'insaa kun uggura daandii lafaa, xiyyaaraa fi galaana gubbaa kan cuffe haleellichi raawwatee guyyoota lama booda ture. Misaa'eelli finciltoota Huutiin Yeman keessatti lolan kanaan gara Riyaad magaalaa gudditti Saawuudiitti darbatame buufata xiyyaara isaanii irra bu'e.
Dooniin UN kan qamadii toonii kumaatamaan lakkawamu fe'e gara buufata Saaleef gaheera.
Dooniin kun namoota miliyoona 1.8'f nyaata ji'a tokkoof gahu fe'ee akka jiru daareektarri Sagantaa Nyaata Addunyaa (WFP), Isteefan Andeersan BBC'tti himaniiru.
''Dooniin kun torban lamaaf naannoo ''qarqara galaanaa irraa achi fagaachuun'' heeyyama eegachaaf dirqamee ture, jechuunis dubbataniiru.
Kanaan duras dooniin daldalaa tokko daakuu qamadii toonii 5,500 fe'ee buufata Hudaaydaah, kan kibba Saaleef naannoo finciltoota Huutiin to'atamu buufatee ture.
Kunis, haalli jiru akka gaariitti jijjiramu agarsiisaa jira kan jedhan Obbo Andeersan, ''gargaarsi namoomaa qofti rakkina kaaba Yemen keessaa furuu hindanda'u. Keessattu namoota fooyyee qabanii fi sagantaa gargaarsa keenyaan hammatamu hindanda'iniif gabaa irratti dhiheesitii argachuu danda'uun waan gaariidha,'' jedhaniiru.
Goodayyaa suuraa Gargaarsi akka galuuf hinheyyamamu taanaan balaa guddaatu qaqabuu mala, jedhu dhabbileen namoomaa
Jalqaba torban kanaatti, humni Saawuudiin gaggeefamu gargaarsa namooma ilaalchisee buufata doonii Huudaaydaah akkasumas dirree xiyyaaraa Sana'aa akka banu ifa godhee ture.
Haa ta'u malee, Mootumoota Gamtoomanitti waajjirri dantaa gargaarsa namoomaa uggurri buufata doonii Hudaaydaah ammalle akka itti fufee jiru Jimaata darbe dubbataniiru.
Hayyamni humna walta'insa Saawuudiin gaggeefamu kana kan godhame, meeshaan waraanaa gara finciltootaatti akka hindabarree xiinxala erga godhamee booda ture. Saawuud Araabiyaan Iraan meeshaa waraanaa kenuun Huutii gargaarti wayita jette yakkitu, Teeraan ammoo ni waakkatti.
Xiyyaarri gafa Sanbataa Sana'aa keessa qubate talaallii doozii miliyoona 1.9 kan fe'ee haa ta'u malee, Mootumoota Gamtoomanitti dhaabbanni da'immanii 'UNICEF' akka jedhutti, kan amma gahees isa barbaachisu hedduu keessa xiqqoodha.
''Namoota garaa da'iimaniif qaban hundaaf, ammas irra deebii'uun waantoota baay'ee hatatamaa fi baay'inaan barbaachisaan akka galchuu nu hindhorkine isiin kadhadha, jedhuun UNICEF'tti Daarektara jiddu gala Bahaa Geerti Kaapelaaree Royitarsitti himan. ''Tarkaanfiin kaleessaa tarkaanfii xiqaa fudhatame dha.''
Wayita ammaa Yeman keessatti namoonni miliiyoona 20 ol ta'an gargaarsa nyaataa hatatamaan barbaadu. Isaan keessayis miliiyoonni 11 daa'imani yoo ta'an, kan 400,000 ta'an ammoo hiri'ina nyaataa cimaan kan hubamaniidha.
Humni walta'insaa kunis waraana amanamtoota Pirezidaantii Abdiraabuuh Maansuur Haadii fi Huutii jiduutti bara 2015 galee ture.
Erga yeroo sanaatii kaasee halleellaa karaa lafaa fi samiitiin gaggeefameen namoonni 8,670 ta'an du'usaanii, ragaan UN ni mul'isa.